musha » Trans - Agender - Asiri-Bhinari Zviwanikwa
Directory Category: Trans - Agender - Asiri-Bhinari Zviwanikwa
Trans - Agender - Asiri-Bhinari Zviwanikwa
Transgender Dzidzo Vanotsigira (TEA) yeUtah
TEA yeUtah isangano repasirese transgender (trans) sangano rekutsigira. Trans-kusanganisirwa kwagara kuri kwekutanga tarisiro yeTEA yebasa raUtah. Kubva pakuona kuti kuzivikanwa kwevanhurume nevanhukadzi chikamu chakakosha chekusasarura uye pekugara paruzhinji zvisungo nemitemo…
Yunivhesiti Hutano hweTransgender Hutano Chirongwa
Iyo Transgender Hutano Chirongwa paUniversity yeUtah Hutano inounza mhando hutano hutano kuendesa vakuru nevechidiki kubva kumatunhu ese ehupenyu. Isu tinonzwisisa kuti yega yega trans kana yevakadzi-akasiyana ruzivo rwevanhu rwakasiyana. Vanachiremba vedu vachange varipo kuti vakupei rubatsiro rusingaperi chero rwendo rwenyu parunotora. Isu tinopawo misangano yemwedzi nemwedzi yekudzidzisa varwere kuUtah Pride Center. Titevere isu pasocial media kuti tione murwere nyaya, zviitiko, uye nhau nezvechirongwa chedu. Tevedzera @uofutranshealth